Talo Bixin Ku Socota Madaxweynaha Oo Ku Aadan Khayraadka Badda Iyo Waxay Mudan Yihiin Qadarin | Baarcadeeye
Talo Bixin Ku Socota Madaxweynaha Oo Ku Aadan Khayraadka Badda Iyo Waxay Mudan Yihiin Qadarin
Baddu waa deegaan balaadhan oo u dhigma 73% koonkan aynu ku nool nahay guudkiisa. badaha waaweyn iyo gacamada ka farcama, waxa ku nool in ka badan 60% noocyada noolaha Alle ku khalqay xidigan aynu ku uumanahay. Noolaha ku jira baddahu dhamaantood waa xalaal uu cuni karo aadamaha, dheefna ka heli karaan. Baduhu waa deegaan aanay saamayn balaadhan ku yeelan isbedlka joogtada ah ee cimilida aduunku, sida kulaylka qoraxda, cufka hawada, socodka iyo xawaaraha dabaylaha, Roob yaraanta iyo abaaraha, nabadguurka iyo wixii la mid ah.
Keyraadka Eebe ku manaystay badahu aad ayay u badanyihiin una kala duwanihiin, hadii aynu soo qaadano qaar ka mid ah, waxa ugu muhiimsan:-
	Kaluunka oo leh noocyo ah
	Cusbooyin (milix) kala duwan
	Falax-falax (Sea shells)
	Batreool caydhin
	Macdan kala duwan
	Kuwo kale oo aad u faro badan
Baduhu, waxa kale oo ay leeyihiin faa’iidooyin kale oo fara badan oo aadamuhu ku daboolo baahiyaha kale duwan ee uu leeyahay, waxana ka mid ah:-
•	Gaadiidka badda ee wax la isku gaadhsiiyo (maraakiib, doonyo iyo laashash)
•	Dekada wax laga doofiyo waxana lagala soo dego isla markaana fududeeya doofka iyo isku socoddka dadka
•	Koronto laga dhaliyo dhaqdhaqaaqa mowjadaha badda loona isticmaalo haahiyaha nolosha.
•	Baddu waxay leedahay goobo-dabaaleed (beaches) iyo dalxiis oo qurux badan oo lagu raaxaysto dakhli badana laga helo.
2.	Badaha aynu kor idiin soo sheegnay ee baaxadda leh iyo khayraadkooda balaadhan, waxay Somaliland ku leedahay xeeb dherer keedu gaadhayo sidaad Boqol iyo sodon kilo mitir ( (830 KM) (lawyocado ilaa Qaw). Badda Somaliland waxay ledahay wax kasta oo ay leeyihiin badaha aduunku, ka faa’idaysigiisuna waxa uu u yaala shacbiga baahan ee Somaliland. Iyo xukumadiisa. Su’aalaha ina hortalaa waxa ay tahay intaa in le’eg ayuu shacbiga reer Somaliland ka faa’iidaystaan kheyraadka badihiisa iyo caqabadaha hor taagan. Waxa hubaal ah in aanay wax micno leh ka faa’iidaysan. Waxaan odhan lahaa in ka yar 1% (boqolkiiba hal). Caqabadaha hortaagan waxa ka mid ah:-
•	Shecbiga reer Somaliland oo reer guuraa u badan , dhaqankooda, aqoontooda, ku noolaanshahooda iyo ka faa’iidaysigooduna aad u yar yahay.
•	Dhiirigalinta, bogaadinta iyo maal-gelinta xukumada Somaliland oo aad u yar .
Dhiirigelinta Wax Soo Saarka Badda Ee Xukumada Somaliland Waxa Ugu Muhiimsan:-
•	Wacyigelinta dadka ee wax soo saarka badda.
•	Maalgelin dawladeed oo lagu daydo.
•	Maal-qabeenka oo lagu khasbo in ay maalgashaan wax soo saarka badda.
•	Maal gashiga dibadeed ee wax soo saarka badda oo loo sameeyo nidaam soo jeedasho leh iyo shuruuc damaanad qaad leh.
•	Saylado caalami ah iyo kuwo goboleed oo loo sameeyo wax soo saarka badda Somaliland.
•	Warshadaha fudud ee lagu farsameyo wax oo saarka badda oo laga hirgeliyo dalka sida kuwa kaluunka iyo milixda.
•	Kaabayaasha wax soo saarka sida, dekedaha, gaadiidka badda iyo wadooyinka oo la hormariyo si loo fududeeyo hawlahooda.
•	Qalabka wax soo saarka badda sida laashashka, shaabaagta, qaboojiyayaasha iyo wixii la mid ah oo lagu sameeyo dalka gudihiisa
•	Aqoonta iyo xirfadaha wax soo saarka badda oo kor loo qaado, gaar ahaan dadka ku nool xeebaha, isla markaana degaanadaas laga hirgeliyo aqoon xirfadeed ku wajahan wax soo saarka badda.
3.	Wax soo saarka tooska ah ee badda Somaliland waxa ugu muhiimsan kaluunka iyo milixda. Wax soo saarka kaluunka sida fudud loo samayn karo waxa ugu muhiimsan:-
•	Kaluunka Qalajisan ( salted)
•	Dhagaha libaaxa
•	Kaluunka Duban ( smoked)
•	Kaluunka Keydsan ( frozen)
•	Kaluunka Warshadaysan ( Processed)
4.	Markii shacbiga iyo xukumadda Somaliland midna ka faa’iidasan waayay kaluunka ceegaaga badaheena, waxa si sharcidaro ah uga kaluumaysta xeebaheena quruumaha kale ah:
	Iyo Kuwo kale
Waxa xasuus iyo murugo mudan in kaluunkeena lagu gurto sharci daro ganacsatadeena damiirkoodu dhintayna debadaha ka keenaan kaluun qasaacadaysan. Nin soomaliyeed ayaa laga hayaa dadkaygii duunyo la’aan ayay u dhimanayaan duunyadaydiina dad la’aan ayay u baaba’aysaa.
Milixdu waa wax soo saarka labaad ee badda Somalilan.d Milixda Somaliland waa tan ugu wanaagsan waxana la yidhaahdaa (Iodized Salt). Nuucyada milix ee wax soo saar kooda looga baahan yahay waxa ka mid ah:
o	Milixda dadka ( house hold)
o	Milixda xoolaha (Animals)
o	Milixda warshadaha ( industrial)
o	Milix kale ( Other)
5.	Wax soo saarka kaluunka & milixda ee laga soo saari karo badda Somaliland iyo goobaha ku haboon in laga hirgaliyo.
	Laaso surad
	Bulo Xaar
	Ceel sheikh
	Lug haya
6.	Su’aashu hadii ay tahay, xagee ayaa laga keenayaa maaliyada iyo imkaaniyaadka kale ee lagu hir galinayo wax soo saarkan, Jawaabtu waa Sadexdan khaanadood oo u kala miisaan weyn sida ay u kala horeeyaan.
	Awooda, Aqoonta iyo Maaliyada Shacbiga reer Somaliland.
	Siyaasada, dhiirigalinta iyo awoodaha kale ee xukumada.
	Kaabida taakulada aadanimo ee bulshada caalamka.
Hadii la is waydiiyo sayladihii loo iib gayn lahaa kaluunka iyo milixda laga soo saaro badaha Somaliland, jawaabtu waxay tahay:-
	Gudaha Somaliland
	Dad weynaha Ethoipia
	Bariga iyo badtamaha Africa
	Dunida kale ee u baahan.
Waxa xusid gaar ah mudan in dalka Ethiopia oo ay ku nool yihiin dad ka badan Boqol milyan oo qof iyo wadmo badan oo ku xeeran oo aan lahayn bad, ay u baahan yihiin kaluun iyo milix aad u badan oo hadii aynu ku dadaalno horumar balaadhan ku gaadhi karno.
Dalka Ethiopia ee aynu dariska nahay iyo wadamada ku xeerani waxay u baahan yahiin in ka badan kun tan oo milix ah maalin walba. Waa isticmaalka dadka oo kaliya. Baahidooda milix waa in ka badan sadex boqol iyo lixdan kun oo ton(60,000 Ton). Hadii lagu daro baahidooda milix ee xoolaha iyo warshadaha, waxay ka badanaynsaa sadex jibaar. Waa baahi milix oo ka badan hal milyan oo ton sanadkii . Baabidooda kaluun ayaduna waa qadar aad uga badan baahidooda milix.
Dhinaca kale, inagu waxa aynu Ethiopia lacag adag kaga soo iibsanaa Jaad ( US 540,000,000 Million) Sanadkiiba. Lacagta aynu kaga soo iibsano Jaadka oo aan lahayn wax faa’iido ah, wax badeeco ah oo aynu badalkiisa u u iib gaynaa ma jirto.
7.	Hadii aynu ku dadaalno wax soo saarka Khayraadka Eebe ee Baddeena ( kaluunka iyo Milixda), waxaan hubaa in aynu xal u heli doono dhibaatooyinka ina ragaadiyey ee aynu u maaro laanahay sida:-
	Baahiyaha aas-aasiga ah iyo saboolnimada ( Hunguriga, hoyga iyo huga)
	Shaqo la’aanta inagu sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa
	Qiimo dhaca lacagteena iyo sixir bararka naafeeyey shacbigeena danyarta ah
	Tahriibka iyo kala yaaca ubaxeenii (Dhalin yarada) aakhiro u diray nolol raadis awgeed.
	Aqoonsigan aynu u waalanay ee aynu ku tawakhinay qaar koodna kuba kala dhimanay aadamaha ku nool dunidan.
8.	Guntii iyo gabagabadii, aniga oo ka duulaya arimaha kor aynu ku soo sheegnay iyo kuwo kale oo aad u badan halkana aan lagu soo koobi Karin, kuna aadan khayraadka ceegaaga badaheena iyo waxsoo saarkooda tooska ah ee kaluunka iyo milixda, waxa anigu ku talin lahaa:-
	Xukumada Somaliland in ay u soo jeesato, siyaasad cadna ka yeelato wax soo saarka kheyraadka badaheena gaar ahaan kaluunka iyo milixda.
	Ganacsatadeena in lagu wacyigeliyo lagunna waajibiyo ka qaybgalka horumarinta wax soo saarka Badda, isla markaana laga mamnuuco in ay debadda ka keenaan kaluun iyo Milix.
	In la sameeyo wasaarad u xilsaaran horumarinta wax soo saarka badda (kaluunka iyo milixda), magaceeduna yahay wasaaradda horumarinta wax soo saarka Badda iyo hayado u xil saran wax soo saar badda oo hoos yimaada.
	Xukumadu in ay ku dadaasho hirgelinta mashaaric iyo warshado wadajir loo leeyahay oo soo saara kaluun iyo milix. Waxaan is leeyahay, wax weyn ayay ka tari lahayd dhiirigelinta wax soo saarka badda hadii boqolkiiba hal iyo badh 1.5 loogu daro miisaaniyada qaranka.
	Xukumadu in ay ku dadaasho sidii dalka gudihiisa loogu samayn lahaa qalabka kaluumaysiga sida, laashashka, shabaagta iyo wixii la mid ah, isla markaana kor loogu qaadi lahaa xirfadaha wax soo saarka badda ee dadka.
	Xukumadu in ay ku dadaasho sayladihii iyo suuqyadii loo iibgeyn lahaa wax soo saarka badda ( Kaluunka iyo Milixda), gaar ahaan wadanka Itoobiya iyo wadamada la jaarka ah.
	Dhiirigelinta maal gashiga dibadeed ee wax soo saarka badeena iyada oo loo diyaarinayo shuruucdii lagu hagi lahaa socodka hawlahooda iyo sugidda amaankooda.